Dendi ဘယ်မှာ standin ကစားဦးမလဲ – Gaming Noodle
“Dendi ဘယ်မှာ standin ကစားဦးမလဲ”
ပရိသတ်အချစ်တော် ဝါရင့်ကစားသမားဟောင်းကြီး Dendi တစ်ယောက်ကတော့ Aachen City Esports မှာ standin ဝင်ရောက်ကစားမယ်လို့ မကြာသေးမီက ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မကြာမီကျင်းပတော့မယ့် WePlay! Reshuffle Madness start today ပြိုင်ပွဲရဲ့ open qualifier ပွဲစဉ်များမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် Dendi နဲ့ သူ့ရဲ့အသင်းမှာ LeBronDota, Mitch, EcNart နဲ့ V-Tune တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Dendi ဟာ ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် LeBronDota ကို ကူညီကစားပေးချင်လို့ ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LeBronDota ဟာ Na’Vi မှာ Dendi နဲ့အတူ လအတန်ကြာ ကစားဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Dendi ဟာ 2019-2020 DPC season အတွက် ကိုယ်ပိုင်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ အလားအလာရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ standin ကစားမယ့် သတင်းက ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
Dendi နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကစားဖူးပြီး လက်ရှိမှာ Team Secret ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ Puppey ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာလည်း Dendi အကြောင်းပြောကြားချက်များ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Puppey ရဲ့ အယူအဆအရတော့ Dendi ဟာ လက်ရှိ Dota2လောကမှာ ဝါရင့်လှတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အသင်းအဖွဲ့ထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် mid laner တစ်ဦးအနေနဲ့ရော အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပါ တစ်ပြိုင်တည်း ကစားဖို့ ခက်ခဲလှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Dendi ကတော့ သူဟာ mid laner အဖြစ်ကနေ တခြား role များကို ပြောင်းလဲကစားဖို့လည်း လက်ရှိမှာ ဝန်မလေးဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပရိသတ်များအမြင်မှာတော့ Dendi ကို mid lane မှာပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့နေခဲ့ရလို့ role ပြောင်း ကစားမယ်ဆိုရင် ထူးခြားနေကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် role ပြောင်းကစားခြင်းဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ မြင်တွေ့ရခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်တော့ကြောင်း TI နှစ်ထပ်ကွမ်းရရှိခဲ့တဲ့ OG.N0tail အပါအဝင် နာမည်ကြီး ကစားသမားများက သက်သေပြခဲ့ကြပါပြီ။
Aachen City Esports ဟာ WePlay Esports Reshuffle Madness ရဲ့ Open Qualifier #1 မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် Dendi ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ Open Qualifier #2 မှာတော့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး Main Event အတွက် တစ်နေရာ ရရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Standin ဝင်ကစားတဲ့ Dendi ကတော့ သူ့ရဲ့ Trademark role ဖြစ်တဲ့ Mid အနေနဲ့ပဲ ကစားခဲ့ပါတယ်။
WePlay Esports Reshuffle Madness ပြိုင်ပွဲကတော့ ဆုကြေး ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၆-၂၃ ရက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် EU နဲ့ CIS Dota2 အသင်းတွေအတွက် Online Tournament တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က Valve ရဲ့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ 2019-2020 DPC ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ Dendi အပါအဝင် အခြားကစားသမားများနဲ့ အသင်းများရဲ့ DPC season အတွက် ပြင်ဆင်မှုများနဲ့အတူ လာမယ့် ပြိုင်ပွဲများကို ပရိသတ်အများမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ Esports သတင်းများနဲ့ အကြောင်းအရာများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
“Dendi ဘယျမှာ standin ကစားဦးမလဲ”
ပရိသတျအခဈြတျော ဝါရငျ့ကစားသမားဟောငျးကွီး Dendi တဈယောကျကတော့ Aachen City Esports မှာ standin ဝငျရောကျကစားမယျလို့ မကွာသေးမီက ကွညောလိုကျပါပွီ။ မကွာမီကငျြးပတော့မယျ့ WePlay! Reshuffle Madness start today ပွိုငျပှဲရဲ့ open qualifier ပှဲစဉျမြားမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ Dendi နဲ့ သူ့ရဲ့အသငျးမှာ LeBronDota, Mitch, EcNart နဲ့ V-Tune တို့ ပါဝငျပါတယျ။
တကယျတော့ Dendi ဟာ ဒီပွိုငျပှဲအတှကျ LeBronDota ကို ကူညီကစားပေးခငျြလို့ ဝငျရောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ LeBronDota ဟာ Na’Vi မှာ Dendi နဲ့အတူ လအတနျကွာ ကစားဖူးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈသလို သူနဲ့ရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ အငျတာဗြူးတဈခုမှာတော့ Dendi ဟာ 2019-2020 DPC season အတှကျ ကိုယျပိုငျအသငျးအဖှဲ့တဈခု ထူထောငျဖို့ အလားအလာရှိကွောငျးပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ လောလောဆယျမှာ standin ကစားမယျ့ သတငျးက ထှကျပျေါလာတာပါ။
Dendi နဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကစားဖူးပွီး လကျရှိမှာ Team Secret ရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈနတေဲ့ Puppey ရဲ့ အငျတာဗြူးမှာလညျး Dendi အကွောငျးပွောကွားခကျြမြား ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Puppey ရဲ့ အယူအဆအရတော့ Dendi ဟာ လကျရှိ Dota2လောကမှာ ဝါရငျ့လှတဲ့ကစားသမားတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ကိုယျပိုငျအသငျးအဖှဲ့ထောငျခဲ့မယျဆိုရငျ mid laner တဈဦးအနနေဲ့ရော အသငျးရဲ့ခေါငျးဆောငျအနနေဲ့ပါ တဈပွိုငျတညျး ကစားဖို့ ခကျခဲလှတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Dendi ကတော့ သူဟာ mid laner အဖွဈကနေ တခွား role မြားကို ပွောငျးလဲကစားဖို့လညျး လကျရှိမှာ ဝနျမလေးဘူးလို့ ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ပရိသတျမြားအမွငျမှာတော့ Dendi ကို mid lane မှာပဲ နှဈပေါငျးမြားစှာမွငျတှနေ့ခေဲ့ရလို့ role ပွောငျး ကစားမယျဆိုရငျ ထူးခွားနကွေမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ role ပွောငျးကစားခွငျးဟာ ယနခေ့တျေမှာ မွငျတှရေ့ခကျခဲတဲ့အရာတဈခု မဟုတျတော့ကွောငျး TI နှဈထပျကှမျးရရှိခဲ့တဲ့ OG.N0tail အပါအဝငျ နာမညျကွီး ကစားသမားမြားက သကျသပွေခဲ့ကွပါပွီ။
Aachen City Esports ဟာ WePlay Esports Reshuffle Madness ရဲ့ Open Qualifier #1 မှာ မအောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ Dendi ပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ Open Qualifier #2 မှာတော့ အောငျမွငျခဲ့ပွီး Main Event အတှကျ တဈနရော ရရှိခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
Standin ဝငျကစားတဲ့ Dendi ကတော့ သူ့ရဲ့ Trademark role ဖွဈတဲ့ Mid အနနေဲ့ပဲ ကစားခဲ့ပါတယျ။
WePlay Esports Reshuffle Madness ပွိုငျပှဲကတော့ ဆုကွေး ဒျေါလာ ၅၀,၀၀၀ ပေးအပျမှာဖွဈပွီး စကျတငျဘာ ၁၆-၂၃ ရကျအတှငျး ယှဉျပွိုငျရမယျ့ EU နဲ့ CIS Dota2 အသငျးတှအေတှကျ Online Tournament တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
မနကေ့ Valve ရဲ့ တရားဝငျ ထုတျပွနျခကျြအရ 2019-2020 DPC ပထမဆုံးပွိုငျပှဲကို နိုဝငျဘာလမှ စတငျယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ Dendi အပါအဝငျ အခွားကစားသမားမြားနဲ့ အသငျးမြားရဲ့ DPC season အတှကျ ပွငျဆငျမှုမြားနဲ့အတူ လာမယျ့ ပွိုငျပှဲမြားကို ပရိသတျအမြားမြှျောလငျ့စောငျ့စားနကွေဆဲပဲဖွဈပါတော့တယျ။ Esports သတငျးမြားနဲ့ အကွောငျးအရာမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။